Nin cuuryaan ah oo Försäkringskassan ka qiyaamay 14 milyan | Somaliska
Nin sheegtay in uu cuuryaan yahay ayaa lagu eedeeyay in uu Hayada Caymiska bulshada (Försäkringskassan) uu ka qiyaamay lacag gaareysa 14 milyan oo karoon. Ninkaan oo baaritaan dheer ay ku samaysay Hayada ayaa ugu dambeyntii la fashiliyay qiyaanadiisa isaga oo lagu xukumay 4 sano oo xarig ah.
Sidoo kale waxaa 1 sano lagu xukumay 3 ka mid ah reerkiisa oo horey ugu diiwaan gashanaa in ay yihiin gacanyarayaashiisa. Waxaa kale oo ninkaan laga dalbaday in uu dib u bixiyo lacag gaareysa 13.5 milyan oo ka mid ah lacagtii uu qiyaanada ku qaatay.
Ka dib markii uu shil galay sanadkii 2001 ayuu ninkaan sheegtay in uu soo gaaray dhaawac weyn oo uu baahanyahay gacanyare isagoo soo bandhigay cadeyn dhaqtar qoray. Mudo 6 sano ah ayaa isaga iyo 3 walaalihiis ah waxay lacag badan ka qaadanayeen Försäkringskassan.
Ninkaan ayaa xitaa sheegtay in uusan awoodin in uu dharka gashado, balse baaritaan ay sameeyeen booliska ayaa lagu soo bandhigay filim laga duubay isaga oo gurigiisa cowska ka jaraya. Waxa uu sidoo kale fasaxa u tagi jiray Maraykanka iyo wadamo kale.
Försäkringskassan ayaa sanadihii dambe siyaadisay baaritaanka ay ku sameeyaan dadka qaata lacagaha taageerada ah iyadoo isticmaaleysa sirdoon iyo internetka. Hayada ayaa sanadkasta waxay bixisaa lacag taageero ah oo gaaraysa 23 bilyan oo karoon, iyadoo la sheegay in qiyaastii 1 bilyan qiyaano lagu qaato.
Dhaqtarka warqada qoray ayaa dhinaca kale lagu waayay wax dambi ah.
Soomaalida oo ka qeyb qaadatay sameynta heesta qaranka Sweden ee Euro 2016
December 11, 2011 at 12:34
kkkkkkkkkk, bisinkoow war waaba sheeka cusub ,
December 11, 2011 at 13:49
asc Dhammaan aqyaarta .
Jimcaale sxb Ninka Ma Swedishaa Mise Waa qowmiyad kale bal intaas ku soo dar wax isdaba marin swedish kuma ogeyne kkkkk
December 11, 2011 at 17:54
dhaamn sln Jimcali plz nin ma swedash cadaan mise ajnabi sxb dad walba o dunida ku nol ama qoomiyad walba dad qiyaano wey leyahiin
Sanka maya ninku waa Somali ee beeesada waala qaaraaamahaa ee qodaada kabixi. macquul ma,ila ahin aniga waxaan u maleeynaa inay F-kasaha been ku kabeen arintaan maxaa yeelay 6-sano ma,ahin mudayar waaana lagu ogaa karay wax walbo lkn masabidaaad aan u arkaaaa arintaan
yaa yiri ninku wa somaali masago war ninku wa carab wa carab sheydan alaa reerku xuma waxan ka joogi weyney quurbaha xiita hadii eey nagaso masafuuriyen wadamadodi maxay nagaraban waxan wada daganahay xafad waxay maliin kasta naga xadan baskiilka markan ku xiirano bananka
Ninku waa Swedish.
December 11, 2011 at 19:56
haaaaaaaaaaaaaaaaa gartay waxan mooday carab
Dadkooda kama shakeyan ee qaxootiga ilaahy dabo dhigay.
thnx Mr Jimcale aniga waan qiyaasay sababto ah ninka hadii uu Ajnabi ahaan lahaa marka hore ayaa shaki dhicilahaa ,ninka in uu Swedash yahay ayaa waqtiga igu dhereysa oo shakiga yareysa , dadka swdashka ah shaki badan lagama qabo Ajbaniga ayaaa caan ku ah BEETA iyo QIYANADA , waa sida ey dadka Swdashka ah aamin san yahiin thnx dhaman
ASC dhamaan tagerayasha somaliska wan idinsalamay marka xiktana waxan raba in aan so aal weydiyo masuliyinta somaliska horta xagee kudambeysay arimihi mideynta reereha